नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : स्वर्ग जस्तो देश नेपाल हेर्दा हेर्दै कसरी नर्क बनाउँदै छन ? अब कति नेपालीले अकालमा मर्नु पर्ने होला ? हेर्नुस यो भिडियो जसले बर्तमान नेपालको वास्तविकता बोलिरहेको छ !
स्वर्ग जस्तो देश नेपाल हेर्दा हेर्दै कसरी नर्क बनाउँदै छन ? अब कति नेपालीले अकालमा मर्नु पर्ने होला ? हेर्नुस यो भिडियो जसले बर्तमान नेपालको वास्तविकता बोलिरहेको छ !
Posted by www.Nepalmother.com at 3:45 PM